भौगर्भिक समाजको अध्यक्षमा डा. गजुरेल निर्वाचित Nepalpatra भौगर्भिक समाजको अध्यक्षमा डा. गजुरेल निर्वाचित
भौगर्भिक समाजको अध्यक्षमा डा. गजुरेल निर्वाचित
काठमाडौँ । नेपाल भौगर्भिक समाजको अध्यक्षमा डा. अनन्तप्रसाद गजुरेल निर्वाचित भएका छन् । समाजको २० औँ कार्यकारिणी समितिको शुक्रबार साँझ सम्पन्न मतगणना अनुसार डा. गजुरेल ३७१ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी डा. सुधीर रजौरेले २७२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यस्तै, उपाध्यक्षमा मनिका झा (३९५ मत) महासचिव डा. लोकविजय अधिकारी (३९६ मत) ल्याई विजयी हुनुभएको निर्वाचन उपसमिति संयोजक शिवकुमार बाँस्कोटाले राससलाई जानकारी दिए । यसैगरी, उपमहासचिमा सविना खत्री, कोषाध्यक्षमा आशिष केसी र तीन सदस्यमा इन्द्र लम्साल, अर्जुन भण्डारी र सौरभ खनाल भएका छन् ।
निर्वाचन हुने आठ पदमध्ये उपमहाचिव र सदस्यबाहेक अन्य सबै पदमा विद्युतीय माध्यमबाट मतदान भएको थियो । कूल ११ सदस्य हुने समाजमा तीन सदस्य अध्यक्षले पछि मनोनीत गर्नेछन् । आठ सयभन्दा बढी मतदाता रहेको समाजको निर्वाचनमा ६४३ मत खसेको थियो ।
उक्त समाजको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. गजुरेलले सबै भूगर्भविद्लाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूगर्भविद्ले विशेषतः बाढी, पहिरो र भूकम्पको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।
#डा. अनन्तप्रसाद गजुरेल
#डा. सुधीर रजौरे
#नेपाल भौगर्भिक समाज
ऋषि पञ्चमी पर्वभित्र लुकेको वैज्ञानिक पक्ष
यस्तो छ कुशे औँसी पर्वभित्र लुकेको वैज्ञानिक पक्ष
नासो र एमआइटीवाइवीच खगोल विज्ञानमा अनुसन्धान गर्न सम्झौता
क्षुद्रग्रह दिवस नेपालमा आज मनाइँदै